Milicsiga heshiiskii Puntland iyo Shirkadda P&O iyo sababta uu u miradhali waayey – Madal Furan
Hoy > Fikradaha > Milicsiga heshiiskii Puntland iyo Shirkadda P&O iyo sababta uu u miradhali waayey
Milicsiga heshiiskii Puntland iyo Shirkadda P&O iyo sababta uu u miradhali waayey
Editor August 12, 2018 August 13, 2018 0
Garoowe (Madal Furan) – Baarlamaanka Puntland ayaa maanta u yeeray Wasiirka dekeddaha iyo Gaadiidka Badda Puntland Siciid Maxamed Raage si ay su’aalo uga weydiiyaan arrimo la xiriira heshiiskii dekedda magaaladda Boosaaso ee shirkadda P&O la gashay maamulka Puntland 6dii bishii April 2017kii oo aan waxba weli ka hirgelin.
Milicsiga Heshiiskii Puntland iyo P&O.
Heshiiska ayaa dhigayey in mudo Lix bilood gudahood ah ay shirkaddu ku keensan doonto qalabka dhismaha shirkadda isla markaasna ay sanad gudihiis ku dhameystiri doonto balaarinta dekedda magaaladda Boosaaso, balse uu dhamaaday mudadii sanadka ahaa ee heshiiskaasi dhigayey.
Qoraal lagu qoray bogga P&O ay ku leedahay Internetka ayaa lagu baahiyey in mudo 30 sanadood ah ay shirkadda P&O ku guuleysatay inay heshiis kula gasho maamulka Puntland maamulida iyo horumarinta dekedda magaalada Boosaaso isla markaasna ay ku maalgelin doonto Adduun dhan US$ 336 Milyan oo u dhiganta lacagta Imaaraadka Carabta (Dh1.235 billion).
Lacagtan ayaa shirkaddu sheegtay inay Laba weji yeelan doonto iyadoo wejiga Koowaad ay ku bixin doonto lacag dhan $136 million (Dh500 million) iyo wejiga Labaad oo maalgelintiisu noqon doonto $200 million (Dh745 million) waxayna intaas ku daray warku in heshiiska ay kala saxiixdeen Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Wasiirka dekeddaha oo dhinac ka soo wada jeeda iyo Madaxa shirkadda P&O Sultan Ahmed bin Sulayem.
Hirgelinta mashruuca dekedda Boosaaso ayaa qoraalka heshiiska lagu sheegay inay ka koobnaan doonaan dhismaha 450 mitir oo lagu darayo dhismaha dekedda iyo dhul shan-hektar ah oo kor loo qaadayo iyo iyadoo la qodayo qoto dhererkeedu gaarayo 12 mitir.
Waxaa sidoo kale jiri doona maalgashi aad u weyn oo ah dhinaca IT-ga iyo Nidaamka Nabadgelyada Terminal-ka (TOS), gawaarida maraakiibta wareega iyo qalabka wax lagu qaado. “Maalgashigaani waa wax ballaaran oo ku wajahan Puntland waxana ay si weyn uga qayb qaadan doonaan horumarinta kaabayaasha Soomaaliya, gaar ahaan Dowladda Puntland,” ayuu yiri Dr. Gaas.
wuxuu kaloo yiri “Horumarinta kaabayaasha dhaqaalahu waa mid muhiim u ah xukuumadda Puntland sababtoo ah waxay hoosta ka xariiqday dadaalada ah in la sii wado heshiiskan damaanad qaadka ah ee ballaarinta dekadda Bosasso waa guul weyn oo loogu talagalay dawladdayda iyo dadka Puntland. Waxay kor u qaadaysaa taariikhda iyo xiriirka ganacsiga ee ka dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Soomaaliya.”
dhinaca kale Agaasimaha shirkada P&O Bin Sulayem ayaa sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay deked ujeedooyin fara badan iska leh fursadna u haysata albaabka laga galo dekeddaha kale marka Konteenarada ay dalalku ku kala bedelanayaan, wuxuu kaloo intaas ku daray in ujeedadda shirkadda P & O ay tahay inay maal gashadaan dekadaha badan oo ku xirmaya suuqyada caalamiga ah iyaga oo adeegsanaya dadka deegaanka iyo horumarinta xirfadaha.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ugu danbeyntii sheegay in Maamulka Puntland uu ka faa’iideysan doona isla markaasna hawlwadeen caalami ah oo la aqoonsan yahay ay gacan ka geysan doonaan kobbaca dhaqaalaha iyo suurtagalnimada ganacsiga.
Heshiiska P&O iyo Maamulka Puntland bulshadu ma soo dhoweeyeen?
Ganacsatada iyo dadweynahuba waxay si weyn uga soo horjeensadeen heshiiska iyo xayndaabka xeebaha Puntland loogu gacan geliyey shirkadda P&O mudada 30ka sanadood ah iyo dibad-baxyo rabshado wata oo sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana arrintaas ka dhashay caro sababtay in dekeddu xirnaato mudo 10 maalmood ka badan taasoo ugu danbeyntii ay Isimada Puntland qaarkood heshiis dhexdhexaadin ah ka galeen mudo Shan bilood ah oo ku ekeyd bishii May ee la soo dhaafay, waxaana ka mid ahaa qodobadii ay soo saareen:-
Dowladdu inay soo bandhigto heshiiska balaarinta dekedda Boosaaso
In Triifada KMG ee Ismadu soo saareen lagu dhaqmo mudo Shan bilood ah
Dekedda Boosaaso waxaa weli ku sugan wakiilka shirkadda P&O u maamula dekedda iyadoo aysan weli shirkadu wax horumar ah ka sameynin gudaha dekedda aysan u oolin wax qalab ah oo muujinaya in shirkaddu isu diyaarineyso dhismaha iyo balaarinta dekedda,
Waxqabadka keliya ee shirkadu qabato ayaa ah qaadista khidmadaha maraakiibta, doonyaha iyo badeecadaha ku soo xirta dkedda Boosaaso taasoo aan wax xisaab celin ah laheyn, kuna dhacda Bangi aysan dowladdu ka war qabin, laheyna xisaab celin la ogyahay.
Shirkadda P&O ayaa si rasmi ah waxay ula wareegtay gacan ku haynta dekedda magaaladda Boosaaso 12kii Oktoobar 2017kii iyaadoo munaasibada wareejintana ay ka qayb galeen Xubno ka socday Golaha Wasiirada, Nabadoono, Isimo iyo Wakiiladda shirkadda P&O
Maxaa hortaagan in uu hirgalo heshiiskii shirkadda P&O ay Puntland la gashay?
Shirkadda P&O oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa masuuliyiinta Puntland u gacan geliyey dhaqaale maaliyadeed oo lagu qiyaasay 21 Milyan oo Doolar, lacagtaas oo aan soo marin Bangiga dowladda aysan maamulin Wasaaradda Maaliyadu.
Madaxweynaha Puntland ayaa wakhti danbe Saxaafadda laga ogaaday inuu dhowr Milyan ku dul yaaciyey mashaariic dhor ah oo ka socday Puntland oo ay ku jiraan Garoonka diyaaradaha Garoowe iyo Wadada isku xirta Ceel Daahir iyo Badhan, waxaa intaas dheer lacag lagu sheegay 800 Kun doolar inuu Madaxweynuhu siiyey xubnaha Baarlamaanka xili uu door bidayey inuu ansixin u helo heshiiska shirkadda P&O.
Mudadii heshiiska shirkadda P&O kula gashay Puntland ayaa dhigayey in 24 bilood gudahood lagu dhameystiro heshiiska wejigiisa Koowaad, balse iyadoo wakhti aad u yari ka harsan yahay mudadaas ayaysan muuqan hal tallaabo oo horumar ah oo shirkadda P&O ay ku dhaqaajisay hirgelinta wejiga Koowaad ee dhismaha dekedda Boosaaaso, lamana garan karo sababta dhalisay in heshiiskaasi u dhaqan geli waayo sidii loogu tala galay.
War Saxaafadeedkii Abu Dabi ee Dr. Gaas.
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa bishii April 2018 magaalada Abu Dhabi ku qabtay Warsaxaafadeed uu ku sheegay in Puntland ay xaq u leedahay inay heshiisyo la gasho Dowlado iyo Shirkado shisheeye “Muqdisho Somaliya ma aha, Soomaaliyana Muqdisho ma aha” ayuu yiri isagoo DFS u muujiyey in Puntland ay haysto awood ka madax banaan talaga laga gooyo magaaladda Muqdisho.
Dr. Gaas ayaa shirkiisa jaraa’id ku amaanay dowlada Imaaraadka Carabta, waxa uuna sheegay in dowladaasi tahay mida kaliya ee taageero weyn siisa maamulka Puntland, waxa uuna sidoo kale sheegay in Imaaraadka kunool yihiin ganacsato badan oo Soomaaliyeed.
” Waxaan idin sheegayaa Puntland xaq ayey u leedahay in Heshiisyo Horumarineed la gasho Dowlado iyo Sirkado shisheeye, Soomaliya ma aha Muqdisho,Muqdishana ma aha Soomaaliya,laakin mar walba majirto wax naga hor istaagaya in ay heshiisyo galno” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Dr. Gaas ayaa xiligaas sheegay inuu Abu Dhabi u tegay tegay daahfurka hirgelinta mashuurca wejigiisa Koowaad.
Waxaa kaloo weli maamulka Dr. Gaas ay dadweynuhu ka sugayaan inuu ka qanciyo madmadowga ku jira heshiiska ay la galeen shirkadda P&O, taasoo u muuqata inuu la galban doonto wakhtiga sii dhamaanaya ee maamulka uu Madaxweynaha ka yahay Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas oo mudo bilo fara kutiris ahi ka hareen.
P&O ma rumeysan tahay inay bixisay lacagtii horumarinta dekedda Boosaaso?
Warar si hoose looga helayo shirkadda P&O ayaa sheegaya inay Maamulka Dr. Gaas ugu manad sheeganayaan inay u gacan geliyeen dhaqaalihii ay ugu tala galeen horumarinta dekedda magaaladda Boosaaso isla markaasna ay si wanaagsan u maamulayaan dhaqaalaha ay ka soo xereeyaan dekedda Boosaaso iyagoo bil walba mushahar joogto ah oo wanaagsan siiya 400 oo qof oo isugu jira ciidanka iyo shaqaalaha dekedda Boosaaso ka diiwaan gashan .
Dekedda Boosaaso waxay ku taallaa Gobolada maamulka Puntland ee Soomaaliya, kaasoo qiyaastii 2000 km kaga beegan Waqooyiga magaaladda Muqdisho, waxna ku taallaa meel istaraatiiji ah oo loogu talagalay gaadiidka badda ee Gacanka Cadmeed, Badda Cas iyo kanaalka Suez.
Sawiro:- Dayax gacmeedka Itoobiya oo dhowaan hawada la gelin doono iyo Abi Axmed oo booqday…………
Gantaalo ay Iiraan iyo Israa’iil isku weydaarsadeen Suuriya gudaheeda
Dowladda mareykanka oo sheegtay in dadkii lagu duqeyntii Bariire ay ahaayeen Al-shabaab iyo….